PEAR OTRADNENSKAYA: SHARAXAAD KALA DUWAN, SAWIR MIRO, SIFOOYINKA IYO SIFOOYINKA BEERASHADA - BEERTA
Fursadaha kala duwan - jeexan Otradnenskaya
Dhirta geedku waa dabeecadahooda dabiiciga ah, waxaa jira dhacdooyin gaaraya 300-400 sano. Noocyo casri ah, oo horayba u jirey wax ka badan 200, ayaa u muuqda mid kala duwan.
Xagaaga, dayrta, jiilaalka, boqolkiiba sodon sano, heer dhexdhexaad ah oo aad u hooseeya - iyada oo aan loo eegin waxa shuruudaha ninkii beerta ka shaqaynayay, wuu hubaa inuu kala duwan yahay.
Waxaa ka mid ah noocyo badan oo aad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u ah dibadda iyo ma aha mid aad u qabsaday, laakiin tayada ay aad u xiiso leh. Pear Otradnenskaya - Faahfaahinta astaamaha kala duwan, sawirrada miraha iyo dib u eegista sifooyinka marka dambe ee maqaalka.
Noocyo ku'saabsan Otradnenskaya kobcaan bisha SebtembarKani waa pear autumn oo leh nolol shelf illaa 4 bilood. Inta lagu jiro kaydinta, miraha midabyada iyo nacnaca, cagaar cagaaran xilliga beergooyska, waxay si tartiib tartiib ah u noqdaan huruud, iyo cirridka cas ee gaduudku wuxuu noqdaa mid aad u iftiimaya.
Faa'iidooyinka noocyada kala duwan ayaa loo tixgeliyaa la'aanta dhadhan casaan leh iyo casiirnimo, laakiin yaa sheegay in qof kasta uu jecel yahay urka pear?
Iyo saxarka macaan ee cufan leh ma aha taageerayaal yar, marka loo eego niyadjab aan kala go 'lahayn.
Wax walba waxaa lagu go'aamiyaa dhadhanka shakhsi ahaaneed ee ninkii beerta ka shaqaynayay, oo aanad ku dhejineynin ereyada "farsamo farsamo", pear-ka Otradnenskaya waa fursado kala duwan, laakiin waxaad ka ogaan kartaa waxa sharraxaadda iyo arki midhaha sawirada.
Noocyada dayrta waxaa kaloo ka mid ah isteroberi: Svetlyanka, Bere Bosk, Tatiana, Uralochka iyo Larinskaya.
Qeexitaan kala duwan Otradnensky
Otradnenskaya ayaa leh noocyo ku'saabsan xooga koritaanka, guduud mugdi madow iyo caleemaha cagaaran, caleemaha khafiifka ah, caleemaha, caleemaha cagaaran, madow, yar, laakiin caleenta xoog leh.
Caleemaha waa caddaan, ubaxa waa caddaan, waxaa lagu ururiyaa inflorescences ee 5-7 ubax kasta. Miraha muuqda, 130 ama 150 garaam noocyada kala duwan, ovalaha ama dhogorta, ma laha dareen ah inuu dhaco, dhalid oo xasilan, sare.
Dhirta samoplodnoe, laakiin in joogitaanka iskutallaabta-pollination, dhalidda waa ka badan.
Noocyo loo aqoonsan yahay sida ugu roon ee pollinators Muscovite, Marble, Elegant Efimova, laakiin haddii aysan suurtogal ahayn in ay ku beeri, nuuca deriska ama dick ka danbeeya xayndaabka ayaa kaa caawin doona.
Fasalka darajada Otradnaya aan qabin, waxay u dulqaadanaysaa xaaladaha cimilada xun, aan saameyn ku yeelan qolofka.
Dareemid in ay qolof jilicsan: Rossoshanskaya qurux badan, Severyanka casaan-hurdi, Lel, qurxinta Orlovskaya, Chizhovskaya, Skorospelka ka Michurinsk, Severyanka, Fairy.
S.T. Chizhov iyo S.P. Potapov - Breeders Moscow Academy Agricultural. K.A. Timiryazev, ayaa helay noocyada kala duwan ee habka isdhexgalka noocyo kala duwan Mawduuca iyo Forest Beauty.
Qiimaynta dhadhanka ee miro ee pear this waa 4.3 dhibcood.
Otradnenskaya kala duwan ee Pear Poznosenny Otradnenskaya waxaa ku jira Diiwaanka Gobolka iyo sida ay sharaxaad ka muuqatay gobolka Central Black Earth.
Gobalkan, noocyo noocan ah isteroberi ee xasuusta Zhegalov, Tonkovetka, Yanvarskaya, Hera iyo Krasulya si fiican u koraan.
Caafimaadka geedka, dhalidda, tayada miraha iyo muddada nolosheeda waxay ku xirnaan doontaa haddii aad dooratay meesha saxda ah ee beerto.
Nafaqada kala duwan ee Otradnenskaya waxay leedahay xoog korodh yar, laakiin inkastoo tan, dooro meel bannaan oo dheeraad ah oo loogu talagalay, iftiin fiican iyo hawada hawada.
Ha ku beeriin isteroberyada derbiyada, caqabadaha, dhismayaasha u dhexeeya, dhirta yaryar way kala bixi doonaan, taajka oo buuxa ma awoodi doono inuu sameeyo, oo aadan ku riyoon karin goosashada wanaagsan.
Xayawaanka waa wax fudud. Ma aha ciidda bacrin ah oo ku filan in la bacrin karo loona nadiifin karo marka laga beerto pear.
Waxaad dhali kartaa geedo jaad ah labadaba guga iyo dayrta laakiin beeritaanka dayrta ma damaanad qaado rooting wanaagsan iyo waxa ka wanaagsan in loo wareejiyo beerto guga, iyo geedo prikopat ee xilliga qaboobaha, oo xididdada ay hareeraha qotodheer, saaraya jir iyo taajkii ka sareeya ciidda xagal ah 45 darajo.
Roots waxaa lagu daraa oo lagu daboolaa wax la macmalay, iyo guga, ka dib markii si taxaddar leh loo baaro iyaga, ka saarista burburka suuragal ah, geedo loo wareejiyo meel joogto ah.
Bedelka meel cusub waa xanuun, ugu fudud in la qaato geedka hal sano iyo labo sanogeedka weyn ee geedka, ayaa ka weyn fursadda ah in laga badiyo.
Ubaxyada koray weelasha waxaa lagu beeray meel joogto ah inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. Goobta la doortay ee beerta pear, tirada lagama maarmaanka ah ee godadka beerto waxaa lagu qodaa oo aan ka yarayn mitir qoto dheer iyo 80 illaa 80 sentimitir dhexroor, iyada oo masaafo aan ka yareyn 3 mitir u dhexaysa geedo. Inkastoo noocyada kala duwan ee Otradnenskaya aysan lahayn awood korodh weyn, wax pear ah uma dulqaadan karo dhumuc.
Lakabka ugu sarreeya ee ciidda bacrin ah ayaa si gooni ah loogu kaydiyaa lakabka hoose ee hooseeya, waxaa lagu daraa ciidda bacriniga ah ee godadka beerta. baaldi humus, hal galaas oo superphosphate, nus koob oo ah potash ah, ash qoryaha qoryahawax walba waa isku dhafan yihiin.
Hillock ah waxaa lagu dhisay bartamihii ceelka dhulka, ciidda wax yar la jajabiyey, xididdada ee seedling waxaa si siman loo qaybiyo qulqulka hoolock iyo si tartiib tartiib ah, si siman daboolay ciidda oo leh adkeyn joogto ah.
Sameynta jeebabka hawadu waxay keenaysaa in laysku daro nidaamka xididka leh dhimashada dheeraadka ah ee geedka.
Qoorta xididku waa inuu jiraa shan sentimitir korka dusha ciidda., marka waraabiyo seedling, ciidda degaya iyo qoorta xididku waa mid ku habboon.
Biyaha inta lagu jiro waraabka ma faafi doono, haddii laga bilaabo ciidda bacrin ah oo yar, oo la dhigo marka qodo godadka beerta, ka dhig dhinacyada. Waraabinta waa in ay ahaato mid fara badan.
Beeridda waa in la dhammaystiraa iyada oo baabuur wadata oo aan ka fogeyn seedlingka, laakiin si aysan u faragelinin seedling, iyo xiro geed jajab leh oo leh xarig si aysan u faragelin horumarinta geedka mustaqbalka.
Sannad kaddib marka la beero dhirta waxay u baahan tahay kormeer joogta ah, waa in la waraabiyo hadba sida loogu baahan yahay, ciidda waa in la furoMunaasabadan sahlan ayaa faragelin doonta qoyaanka qoyaanka.
Ka hor inta aan la bilaabin fruiting, wareegyada pristvolny waxay u fiican yihiin qodidda, iyada oo aan waxyeello nidaamka xididka, wareegyada furan ee furan waxay u suurtagelisaa in ay ciribtirmaan, loosen iyo biyaha ciidda sida loo baahdo.
Kiimikadu uma dulqaadanayso qulqulatooyinka, iyo sida ay u koreyso, maaha inay lagama maarmaan noqoto in biyuhu marar ka badan hal mar bishii bilowga roob la'aanta.
Xoqidda iyo daryeelka
Marka laga beerto sapling hal sano ah, dhirta waa la gaabin ilaa heer aan ka badnayn mitir, kelyaha ku yaal meel ka hooseysa 50 sentimitir waa in laga saaraa.
Faseex laba-sano ah ka dib markii laga beerto meel joogto ah, loona dhajiyay saddex daloolow daloolka dhererkaTani waxay suurtogal u tahay in ay si firfircoon u horumariso nidaamka xididka geedka dhalinyarada.
Bir pear lagu beeray sapling sanadlaha ah, sanadka labaad ka dib markii la beero, waxaa la marinayaa manjooyin isku mid ah. Pear wuxuu u nugul yahay isku-dhafka taajka, iyo iyada oo aan loo baahneyn in uu soo dhexgalo geeddi-socodka iyada oo aan loo baahnayn
Cuntada kala duwan Otradnenskaya skoroplodnaya, miraha ugu horreeya waxay u muuqdaan 3 ama 5 sano ka dib marka la beero, iyo bilawga ah ee fruiting nuugista nadaafadda, taas oo wakhti ka dambeeya lagu beddeli doono nadaafad nadaafadeed.
Pear Otradnenskaya - fasalka qabowga u adkaysta, laakiin haddii uu barafku dhaco, maskaxda ku hay in caleemaha la beddelo waa in la hagaajiyaa lakabka iyo bacriminta;
Rogneda, Duchess, Northerner, Lyra iyo Lel waxay ku faani karaan caabbinta barafka wanaagsan.
Iyadoo bilowga fruiting, qashinka wareegyada pristvolny waa in lagu beddelo qashin iyo jaridda dhirta la beddelo qashin cawska. Geedo iyo laamood qalfoof ah ee geed yar Uma baahnid in la nadiifiyo, laakiin marka ay qaangaadhayaan, xayawaanka dhintay ayaa u muuqda, waa in laga saaraa Isticmaalidda xoqan, nabarrada suurtagalka ah waa in lagu daaweeyaa sulfate birta 3%.
Qashinka Barku waa in la gubaaCayayaanka, cayayaanka ee kudka fungal, lichens iyo mosses waxay ku dhaafaan meelaha dillaacsan ee cayayaanka dhintay.
Wixii faahfaahin ah waxaad u baahan tahay inaad qaadato lime iyo dhoobo qaybo siman iyo 100 garaam oo sulphate bir baaldi kasta oo xal u shaqeynayaKa dib marka la isku qaso, cirku waa inuu lahaadaa cufnaanta labeen dhanaan oo dareere ah.
Nadiifinta dharka iyo nadiifinta waa in la sameeyaa horraanta gu'ga.
Xilliga dayrta, waxaa lagama maarmaan ah in laga qaado miraha mummi laga soo bilaabo dhirta, caleemaha jabay oo gubi, caleemo dhicid iyo miraha jiran, cayayaanka iyo cudurada cudurada ka weyn.
Kulaylka xilliga gu'ga ah maaha kaliya dhirta, laakiin sidoo kale cadowgooda badan, sidaas awgeed waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo xitaa laamaha qaawan. ku buufinta 10% ammonia xal, tallaabadan ka hortagga ah waxaa loogu talagalay dhammaan noocyada fangas iyo infekshannada bakteeriyada iyo cayayaanka.
Daaweynta ka hortagga Baalallay, tsvetkoedov, kalluunka lagu sameeyo ka hor ubax iyo ka dib markii ubax leh cayayaanka kasta. Waa in la ogaadaa noocyada kala duwan ee pear Otradnenskaya waxay leedahay caabbinta dabiiciga ah ee cudurada, iyo wax cuduro ah looma soo sheegin //selo.guru/ptitsa/bolezni-p/gribkovye/parsha.html.
Noyabrskaya, Marble, Orel Summer, Limonka, iyo Elegant Efimova waxay u adkeysanayaan qolofka.
Saldhigga ka hortagga cudurku waa tiknoolajiyad wax ku ool ah, beerta si fiican loo ilaaliyo uma saameyn karto cudurada oo ay ku dhaawacmeen cayayaanka qiyaasta khatarta leh, kormeer joogta ah ayaa tirtiraya suurtogalnimada, cudurada iyo cayayaanka si fudud ayaa loo aqoonsadaa oo loo burburiyaa.
Cunto fasalka Otradnenskaya waxaa si gaar ah loogu soo shubay milkiilaha jilicsan - waa macaan, saxarad cufan, oo wuxuu u fiican yahay samaynta miraha la qalajiyey, iyo macaanka waa mid aad u fiican, iyo miiska sanadka Cusub ayaa qurxin doona.